गम्भिर बिरामी इरफान खानलाई आखिर भएको के हो ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsBollywoodगम्भिर बिरामी इरफान खानलाई आखिर भएको के हो ?
March 7, 2018 sutraentertainment Bollywood, Celebrity, Entertainment, Event, Male, News 0
गम्भिर बिरामी परेका बलिउड अभिनेता इरफान खान आउने १० दिनमा आफूलाई लागेको रोगका बारे बताउने जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत उक्त जानकारी गराएका हुन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘कुनै दिन तपाई बिहान उठेपछि तपाईलाई लाग्छ कि जिन्दगी खत्तम भयो, बितेका १५ दिनदेखि मेरो जीन्दगी एक रहस्यमयी कहानीमा चलिरहेको छ । म एक गम्भीर बिमारसँग जुधिरहेको छु ।’ अभिनेता खानले १० दिनसम्म आफ्ना लागि भगवानसँग प्रार्थना गर्न पनि आफ्ना फ्यानहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘‘मैले जीन्दगीमा कहिल्यै सम्झौता गरिनँ, म जहिले पनि आफ्नो स्वेच्छाले लडिरहें र अबका दिनमा पनि त्यही गर्नेछु ।’उनले लेखेका छन् ।
आफूलाई के रोग लागेको हो नखुलाईकन उनले लेखेका छन्, ‘मेरो परिवार र साथीहरु मेरो साथमा छन्, हामीहरु सही मार्ग निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।’ गम्भीर रोगबारे थप लेखेका छन्, ‘जब सबै परीक्षणहरु हुन्छन् आउँदा १० दिनमा सबै कुरा बताउने छु, तबसम्मका लागि मेरा लागि प्रार्थना गर्नु ।’
ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफोर्मे (Glioblastoma Multiforme) बाट उनी पीडित रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले लेखेका छन् । सनमान्यतया यसलाई ब्रेन क्यान्सर भन्ने गरिन्छ । सन् १९८८ मा मीरा नायरको चलचित्र ‘सलाम बम्बे’ बाट उनी बलिउडमा डेब्यु गरेका हुन् ।
’‘तिमी नै’ भन्दै प्रेक्षालाई फकाउदै नवराज (भिडियो)